PunchTab: valisoa ara-tsosialy sy ny tsy fivadihana amin'ny tranokala | Martech Zone
Zoma, Septambra 2, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Roa herinandro lasa izay dia nanandrana sehatra vaovao nantsoina aho PunchTab. Avy amin'ny tranokala PunchTab:
PunchTab no sehatra tsy fivadihana eo noho eo voalohany voalohany manerantany izay mamela ny tompona tranokala (ao anatin'izany ny bilaogera), ny mpamorona fampiharana ary ny marika hamorona programa fahatokisana amin'ny alàlan'ny finday sy maimaim-poana amin'ny minitra vitsy. Manana vokatra roa malaza isika androany, izay samy tsy lafo na inona na inona ampiasaina:
Fandaharam-pahatokisana maharitra izay azonao ampiasaina hanentanana ny mpampiasa anao hitsidika isan'andro, hizara ny atiny amin'ny tambajotra sosialy ary hamela fanehoan-kevitra (manana kitapo fampandrosoana ihany koa izahay ahafahanao manampy fomba amam-panao hahazoana teboka). Ireo mpampiasa dia hahazo isa isan'andro noho ny hetsika ataon'izy ireo ary afaka manavotra valisoa amin'ny katalaogam-pahatokiana azo ovaina rehefa mahazo isa ampy izy ireo.
Widget fanomezana iray fampiroboroboana indray mandeha izay mamporisika ny mpampiasa anao hanaparitaka ny teny momba ny tranokalanao ho takalon'ny fidirana ao anaty valisoa loka.
Ny tena mampino amin'ilay sehatra dia sady tsotra no ampiasaina no manompo irery. Punchtab dia mamela ny mpivarotra hametraka rafitra valisoa mora foana amin'ny fifaneraserana amin'ny marika… avy amin'ny Retweets, ka hatramin'ny Facebook Likes, hatramin'ny famandrihana mailaka. PunchTab dia nanome fanomezana mihoatra ny 1,000 tao anatin'ny 3 volana lasa - anisan'izany ny iray nataon'i Tim Ferris, MahaloGaming ary CrunchGear. Ny lehibe indrindra dia ny Vyrso.com, izay nahazo fidirana 100,000 9,500 mahery ary mpankafy Facebook 30 XNUMX tao anatin'ny XNUMX andro!
Ireo mpivarotra tranokala savvy sy tompona orinasa dia mahalala fa ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny ho avy dia ho entin'ny fidirana miverimberina, ny fifanakalozana ary ny tolo-kevitr'ireo mpanjifa efa azonao. PunchTab dia manome sehatra iray izay mampifandray tanteraka an'ireo mpanjifa ireo amin'ny lafiny rehetra: an-tserasera, ara-tsosialy, ivelan'ny Internet, finday ary e-varotra. Tale jeneraly sy mpanorina Ranjith Kumaran
Mahagaga ny valiny:
Misy tranonkala 1600 mahery izay mihazakazaka fandaharana tsy fivadihana amin'ny alàlan'ny PunchTab
Ireo tranonkala ireo dia manome mpanjifa 6MM PunchTab (midika hoe olona tsy manam-paharoa 6MM no nahita fandaharana fahatokisana notohanan'ny PunchTab)
Tranonkala lehibe ao amin'ny tamba-jotra PunchTab dia jereo ny famerenanao ny famerenanana 50% -100% avy amin'ny “mpikambana”Amin'ny mpampiasa antonony. Mazava ho azy fa misy fisafidianana tena manokana satria mety ho lasa mpikambana mazoto kokoa ny mpikambana. Ny ampahany lehibe dia izao, ireo tranonkala dia namantatra sy nanome an'ireto fitaovana influencers ireto hitondrana olona marobe hankany amin'ny fety amin'ny alàlan'ny PunchTab.
Ireo tranonkala dia mahita ihany koa eo anelanelany 15% hatramin'ny 35% fampiakarana ny asa sosialy (lahatsoratra amin'ny rindrina, fizarana, sioka)
Mar 24, 2012 ao amin'ny 1: PM PM
Tena mahaliana tokoa, satria ho lasa andevozin'ny asa sasany (bitsika, tiana na +1) hahazoana valisoa vitsivitsy.
Apr 6, 2012 ao amin'ny 1: PM PM
Napetrako tao amin'ny tranonkalako izy io ary nampidiriko tao amin'ny biraon'ny wibiya. Noho ny antony vitsivitsy dia tsy manome valisoa izao ny bokotra facebook twitter sy google, ary mahazo teboka fotsiny ny mpamakiko amin'ny fitsidihana sy hevitra fotsiny. Notateriko tany amin'ny PunchTab ny olana ary nilaza izy ireo fa hijery an'io.
Na izany na tsy izany, plug-in mahatalanjona ity izay afaka manome tosika ny olona hampalaza ny lahatsoratra ary hahazo valisoa. Ary ho an'ny bilaogy / tranokala, ity no zavatra tsara indrindra!
10 Jul 2012 amin'ny 8:38 PM
Tsy nipoitra tao amin'ny pejiko facebook ilay widget